उत्पत्ति ३४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन अस्ट्रियन साङ्केतिक भाषा अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइरिस साङ्केतिक भाषा आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इजरायली साङ्केतिक भाषा इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा इलोको इसोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उम्बुन्डु उरूग्वेयन साङ्केतिक भाषा एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा केन्यन साङ्केतिक भाषा कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा कोस्टा रिकन साङ्केतिक भाषा क्युबान साङ्केतिक भाषा क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्रोएसियन साङ्केतिक भाषा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक ग्रीक साङ्केतिक भाषा ग्वाटेमाला साङ्केतिक भाषा घानायन साँकेतिक भाषा चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिनियाँ साङ्केतिक भाषा चिली साङ्केतिक भाषा चेक चेक साङ्केतिक भाषा जमैकन साङ्केतिक भाषा जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जाभान्टे जाम्बियन साङ्केतिक भाषा जिम्बावे साङ्केतिक भाषा जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिकुना टिग्रिन्या टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डच साङ्केतिक भाषा डेनिश ताइवानी साङ्केतिक भाषा ताजिकी तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई थाई साङ्केतिक भाषा दक्षिण अफ्रिकी साङ्केतिक भाषा नजेमा नर्वेली नाइजेरियन साङ्केतिक भाषा निआस निकारागुआन साङ्केतिक भाषा नेपाली न्यु जील्याण्ड साङ्केतिक भाषा पंगासिनन् पंजाबी पानामानियन साङ्केतिक भाषा पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोर्चुगिज साङ्केतिक भाषा पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फिजियन फिनिश फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फ्रान्सेली फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन बेल्जियन फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा बोलिभियन साङ्केतिक भाषा ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मडागास्कर साङ्केतिक भाषा मराठी मलावी साङ्केतिक भाषा मले मलेसियन साङ्केतिक भाषा मल्यालम माया मालागासी माल्टिज मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा मोजाम्बिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुभेल वलिसियन वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन साल्भाडोरन साङ्केतिक भाषा सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभाक साङ्केतिक भाषा स्लोभेनियन स्लोभेनियन साङ्केतिक भाषा स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस स्विडिस साङ्केतिक भाषा स्वीस जर्मन साङ्केतिक भाषा हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन होण्डुरस साङ्केतिक भाषा
दिनाको इज्जत लुटिन्छ (१-१२)
याकुबका छोराहरू छल गर्छन्‌ (१३-३१)
३४ लेआबाट जन्मिएकी याकुबकी छोरी दिना+ कनान देशका केटीहरूलाई भेट्‌न गइरहन्थिन्‌।+ २ दिना आउने-जाने गरेको त्यहाँका मुखिया हिव्वी+ हामोरका छोरा सकेमले याद गरिरहेका थिए। एकदिन तिनले दिनासित जबरजस्ती गरे र उनको इज्जत लुटे। ३ त्यसपछि सकेमले याकुबकी छोरी दिनालाई साह्रै मन पराउन थाले। सकेम दिनालाई प्रेम गर्थे। तिनले मीठामीठा कुरा गरेर दिनालाई फकाउन थाले। ४ अन्तमा सकेमले आफ्नो बुबा हामोरलाई+ भने: “जसरी भए पनि त्यो केटीसित मेरो बिहे गराइदिनुहोस्‌।” ५ याकुबले आफ्नी छोरी दिनालाई सकेमले बिटुलो पारेको कुरा थाह पाए। त्यतिखेर याकुबका छोराहरू आफ्नो बुबाको बगाल चराउन गएका थिए। त्यसैले उनीहरू नफर्कुन्जेल याकुब चुपचाप बसे। ६ पछि सकेमका बुबा हामोर याकुबकहाँ छोरी माग्न गए। ७ यो कुरा सुन्‍नेबित्तिकै याकुबका छोराहरू हस्याङफस्याङ गर्दै घर फर्के। सकेमले दिनासित जबरजस्ती गरेर इस्राएलको घोर अपमान गरेका थिए। यसरी तिनले गर्नै नहुने काम गरेर+ उनीहरूको बेइज्जत गरेको हुनाले उनीहरू रिसले आगो भएका थिए।+ ८ हामोरले उनीहरूलाई यसो भन्‍न थाले: “मेरो छोरा सकेम तपाईँकी छोरी देखेर भुतुक्कै भएको छ। बिन्ती, तपाईँकी छोरीलाई मेरी बुहारी बनाउन दिनुहोस्‌। ९ हामीबीच बिहेबारी चलोस्‌। तपाईँका छोरीहरू हामी लैजान्छौँ र हाम्रा छोरीहरू तपाईँहरूलाई दिन्छौँ।+ १० हामीसित आएर बस्नुहोस्‌। हेर्नुहोस्‌, सम्पूर्ण इलाका तपाईँकै सामने छ। तपाईँहरूलाई जहाँ मन पर्छ, त्यहीँ बस्नुहोस्‌, व्यापार गर्नुहोस्‌ र जग्गाजमिन जोड्‌नुहोस्‌।” ११ तब सकेमले दिनाका बुबा र दाजुभाइलाई यसो भने: “बिन्ती छ, मलाई तपाईँहरूकी चेली दिनुहोस्‌। तपाईँहरू जे माग्नुहुन्छ, म त्यही दिनेछु। १२ तपाईँहरूले मागेजति दाम तिर्न र कोसेली दिन म तयार छु।+ बस्‌, मलाई दिना भए पुग्छ।” १३ आफ्नी बहिनीको बेइज्जतीको बदला लिन याकुबका छोराहरूले सकेम र उनको बुबा हामोरसित छल गर्ने विचार गरे। १४ उनीहरूले भने: “अहँ! हामीले त्यसो गर्न मिल्दैन। खतनै*+ नगरेको पुरुषलाई कसरी हाम्री बहिनी दिनु? यो त हाम्रो लागि लाजमर्दो कुरा हो। १५ एउटा सर्तमा तपाईँहरूलाई हाम्री बहिनी दिन तयार छौँ। तपाईँहरूकहाँ जति पुरुष छन्‌, तिनीहरू सबैले हामीले जस्तै खतना गर्नुपर्छ।+ १६ अनि मात्र हाम्रा छोरीहरू तपाईँहरूलाई दिन्छौँ र तपाईँहरूका छोरीहरू हामी ल्याउँछौँ। हामी तपाईँहरूसँगै बसोबास गर्नेछौँ र एकै जाति हुनेछौँ। १७ तर हाम्रो सर्त मान्‍नुभएन र खतना गर्नुभएन भने बहिनीलाई लिएर हामी यहाँबाट जानेछौँ।” १८ उनीहरूको कुरा हामोर+ र तिनको छोरा+ सकेमलाई चित्त बुझ्यो। १९ सकेमले उनीहरूको सर्त पूरा गर्न रतीभर ढिलो गरेनन्‌+ किनकि तिनलाई याकुबकी छोरी साह्रै मन परेको थियो। सकेम आफ्ना बुबाको पूरै घरानामा सबैभन्दा इज्जतदार मानिस थिए। २० त्यसकारण हामोर र तिनका छोरा सकेम सहरको मूलढोकामा गए र सहरका पुरुषहरूलाई भने:+ २१ “यी मानिसहरू हामीसित मिलेर बस्न चाहन्छन्‌। हामीकहाँ जग्गाजमिनको कुनै कमी छैन। त्यसैले यिनीहरूलाई हाम्रो इलाकामा बस्न र व्यापार गर्न देऔँ। हामी यिनीहरूका छोरीहरूसित बिहे गर्न सक्छौँ र हाम्रा छोरीहरू यिनीहरूलाई दिन सक्छौँ।+ २२ तर हामीसित एक जाति भएर बस्न यिनीहरूले हामीसामु एउटै मात्र सर्त राखेका छन्‌: पुरुषजति सबैले यिनीहरूले जस्तै खतना गर्नुपर्छ।+ २३ त्यसपछि त यिनीहरूको धनसम्पत्ति, गाईवस्तु सब हाम्रा! त्यसैले यिनीहरूको सर्त मानौँ र यिनीहरू हामीसँग बसून्‌।” २४ सहरको मूलढोका भएर आउजाउ गर्ने सबैले हामोर र तिनका छोरा सकेमको कुरा माने र सहरका सबै पुरुषले खतना गरे। २५ खतना गरेको तेस्रो दिन सहरका सबै पुरुष पीडाले छटपटाइरहेको बेला याकुबका दुई छोरा सिमियोन र लेवि तरबार भिरेर सहरमा पसे। तर सहरवासीले उनीहरूमाथि रतीभर शङ्‌का गरेनन्‌।+ दिनाका यी दाइहरूले सहरका एक जना पुरुषलाई पनि बाँकी राखेनन्‌, तिनीहरू सबैलाई मारे।+ २६ उनीहरूले हामोर र तिनका छोरा सकेमलाई पनि मारे र आफ्नी बहिनी दिनालाई सकेमको घरबाट लगे। २७ तब याकुबका अरू छोराहरू पनि आफ्नी बहिनीको बेइज्जतीको बदला लिन सहरभित्र पसे। त्यहाँ उनीहरूले पुरुषजति सबै मारिएको भेट्टाए र त्यो सहर लुटे।+ २८ उनीहरूले गाईवस्तु, भेडाबाख्रा, गधा सबै लुटे। अनि सहरमा र खेतमा जे-जे भेटे, त्यो पनि लिए। २९ उनीहरूले घरघर पसेर सबै सरसम्पत्ति लुटे, केही पनि छोडेनन्‌ अनि आइमाई र केटाकेटीलाई समेत समातेर लगे। ३० तब याकुबले सिमियोन र लेविलाई भने:+ “यो तिमीहरूले के गऱ्‍यौ? ममाथि कत्रो विपत्ति ल्यायौ!* तिमीहरूको कर्तुतले गर्दा यहाँका कनानीहरू र परिज्जीहरूले अब मलाई छोड्‌नेछैनन्‌। मसित कति नै मानिस छन्‌ र? अब तिनीहरू जम्मा भएर ममाथि आइलाग्नेछन्‌। अब हाम्रो परिवारको सर्वनाश हुने भयो!” ३१ तर उनीहरूले यस्तो जवाफ दिए: “कसैले हाम्री बहिनीलाई वेश्‍यालाई जस्तो व्यवहार गरेको हामी कसरी सहन सक्छौँ?”
^ वा “तिमीहरूले गर्दा म समाजबाट निकालिने भएँ।”